Dambudziko remhashu: hunhu, kubereka uye kukuvadza | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 13/04/2021 10:35 | Ciencia
Munyika mune mhando dzakawanda dzezvipembenene dzinokwanisa kuwanda nekukurumidza. Mazhinji acho ane mukana wekuva zvipuka zvinogona kukonzera kukuvadza kwakanyanya kuzvisikwa uye zvichikonzera matambudziko kuvanhu. Imwe yacho ndeye mhashu yemhashu. Ndiyo imwe yenjodzi dzinokuvadza nekutyisidzira kurima kwenyika. Uye ndezvekuti ivo vanogona kuvhara kusvika kumakiromita zana pazuva uye nekudzima zvese zvirimwa zvavanopfuura napo.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira chinyorwa ichi kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve denda remhashu uye yavo inogona kudzora.
2 Maitiro uye biology yemhashu infestation
3 Mhashu infestation
4 Zvipembenene muSpain
Iyo mhashu infestation yave njodzi yekuchengetedza chikafu munyika zhinji dzekumaodzanyemba. Munhoroondo yese, denda remhashu rakaunza nzara huru uye kupera kwadzo kwese kuchiri kure nekuitika. Nekuti kumhanya kwavanofamba nako uye huwandu hwevanhu varipo, tisingatauri kumhanya kwekubereka, Ita kuti manejimendi nekutonga kwavo kuome.
Iyo yakachinja zvakanyanya zviitiko zvekurima kwemamireniyoni uye yaigona kungodzorwa nenzira kwayo kuburikidza nekushandisa mamwe matanho ezvematongerwo enyika neesainzi kubva pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri. Zviri panguva ino paakatanga kudzikisira kukanganisa kwakakonzerwa neichi chipembenene. Yakave imwe yezvipembenene zvinokuvadza zvakanyanya pamabasa ekurima. Vanogona kufamba nzendo refu uye nekuparadza nzvimbo dziri kukura vachitsvaga chikafu.. Vanofamba vachimhanya kwazvo kuburikidza nezviuru zvemakiromita vakaenda muumbozha hukuru.
Mamiriro azvino ezvinhu emhashu matambudziko mumatunhu akasiyana epasi anoongororwa nevatsvagiri vanobva kumayunivhesiti akasiyana siyana. Izvo zvakakosha kuti uzive maitiro avo nekufamba kwenguva kuti vagone kufanotaura kutama kwavo. Kune marudzi mazhinji emhashu, asi chakanyanya kuparadza ndechekuti Gregarious schistocerca. Rudzi urwu inobata nyika dzinopfuura makumi mashanu, mamwe acho achiri kuvandudzwa. Dzimwe nyika dzakakanganiswa nemhashu dzakazara idzi idzo dzisingakwanise kuwana zviwanikwa zvakakwana kuti vakunde kukuvara kwakakonzerwa.
Maitiro uye biology yemhashu infestation
Lobsters zvipembenene zviri zveOrthoptera odha mukati memhuri yeAcrididae. Mhuri iyi inosanganisirwa mhando dzinopfuura zviuru zvishanu dzinozivikanwa ayo mazana akati wandei awo ndeaya anounza zvinokuvadza uye angangoita makumi maviri acho anokonzeresa kuparara. Mazhinji ezvese aya marudzi ari kufamba uye anogona kufamba madaro marefu achiunza tupukanana.
Denda remhashu hachisi chimwe chinhu kunze kwekuratidzwa kukuru kwezvimwe zvipembenene zvinoitika kana nharaunda yadzinogara ichichinja kubva muchikamu chega kuenda kuchikamu chekufara. Chikamu chega chema lobster chinoenderana nenzvimbo yavo yekuberekera. Iwo anowanzo ari munguva yemvura uye apo chikafu chinogona kupihwa. Denda remhashu rakaburitswa panotanga mwaka wekunaya uye chikafu chiri kushoma. Ndipo ipapo apo zvipembenene zvinomanikidzwa uye zvotanga kushanduka mumuviri, kugadzirisa saizi, ruvara uye chimiro uye kutanga kutamira kune mamwe masayiti kutsvaga chikafu.
Ipapo ndipo paanova mhuka dzinoshinga uye dzinotanga kuburitsa kukuvara kwese kwese. Kurerukirwa kwekufamba kwavo kunoita kuti zviome kudzora kupindirwa kwenzvimbo dzakasiyana dzekurima. Haasi ese zvipembenene zvakafanana, asi pavanodyara mazai mukudonha, vanovata vasina kugona mukati menguva yechando uye vanochochonya muchirimo. Mushure menguva yakatangira pakati pemazuva makumi mana kusvika pamakumi mapfumbamwe, kusangana nekuisa mazai kunoitika. Ndipo apo vanhu vakuru pavanoruma uye hutachiona hwekutenderera hunotanga zvakare.
Zai rega roga rinokandira rinoshanduka kuita zana angangove marobster. Yakaverengerwa kuti pane dzimwe nhambo vanogona kusvika makumi matatu emamiriyoni emakopi.
Takataura kuti ihosha inokwanisa kuvhara makiromita makumi matatu emamirimita. Iyo Gregarious schistocerca Ndicho chipembenene chinonyanya kukuvadza pasi rose uye chinopa mazera akati wandei pagore. Mapfumo anogona kupinda munzvimbo dzinoti kufukidza 30 mamirioni emakiromita. Parizvino, ivo vari kunyanya kubata Africa neese Southeast Asia. Vanogona zvakare kubhururuka muCanary Islands kwavakagara kwemazuva akati wandei kusvikira vanyangarika.
Huni dzinofanirwa kufamba nerudzi rwechigamba kutsvaga nzvimbo kwayo yekugara. Kana vakasazviwana, vanokanganisa zvese zvavanowana voenda kune imwe nzvimbo. Ramba uchifunga kuti hove dziripo pamakondinendi ese uye tupukanana tunobuda kanokwana makore ese 3-4. Nekudaro, kana iwe uine ongororo uye neruzivo rwakanyorwa zvakanaka, zvinozivikanwa kuti kusvika pari zvino hapana kana mushonga wekuuraya zvipembenene nzira yekuparadzwa zvachose.
Chinhu chakakosha ndechekuti uzive kana mhashu ingangoitika. Kana nzvimbo idzo mhuka idzi padzinotanga kupararira dzikatanga kudzorwa, hosha inogona kunyaradzwa uye kudzorwa. Semuenzaniso, kuSpain mhando mbiri dzinozivikanwa kuti dzinorwisa minda yezvirimwa uye dzinogara dzichionekwa munguva dzinoteedzana. Iyo panguva ino iyo inogamuchirwa phytosanitary zvipembenene zvinotanga kushandiswa kudzora kwavo.
Izvo zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti zvipukanana zvemhashu munyika medu harisi dambudziko rakakura kwazvo. Zvisinei, izvi agronomic services kuSpain ndivo vanoona nezve kudzora tupukanana zvakanaka uye nekuziva kuti zvipembenene izvi zvinozoshanduka pavakabva muchikamu chega kuenda kuchikamu chekufara. Ndipo apo zviri nyore kuvauraya kunzvimbo yavo.
Vanoongorora vakati wandei vanosimbisa kuti shanduko yemamiriro ekunze inogona kuchinja maitiro ehupenyu uye kuendesa kwavo kunzvimbo dzavakange vasati vakonzera zviitiko zvakakomba. Ndiri kureva, izvi zvinogona kuramba zvichiwedzera.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda pamusoro penjodzi yemhashu nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Denda remhashu Dzinogona kudzorwa here?